Nepal Mamila | ओलीसँग वार्ताको विषयमा नेपालले भने, ‘ओलीले जाली कुरा गरे, उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न’ - Nepal Mamila ओलीसँग वार्ताको विषयमा नेपालले भने, ‘ओलीले जाली कुरा गरे, उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न’ - Nepal Mamila
ओलीसँग वार्ताको विषयमा नेपालले भने, ‘ओलीले जाली कुरा गरे, उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्न’
काठमाडौं । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँगको वार्तामा जालि कुरा गरेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार जनकपुरमा नेता कार्यकर्ताहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका छन् ।
भेटमा आफूले जेठ २ गतेमा फर्कौँभन्दा उनी नमानेको उनले बताए । निर्णय गरेर गइसकाले आफू पछाडि फर्किन नचाहेको ओलीले बताएकाे उनकाे भनाइ थियाे । ओलीले आफूलाई उल्टो प्रश्न गरेको बताए ।
उनले जेठ २ मा फर्काैँभन्दा तपाईहरु किन आउनु भएन भनेर प्रश्न गर्नु भयो ? आफूले प्रतिप्रश्नमा तपाईले बोलाउनुभयो र ? भन्दा ओलीले तपाईँहरुको मोबाइल बिग्रिएको थियो होला भनेर टारेको बताए ।
उनले वार्तामा पार्टी एकताको पक्षमा ओली नदेखिएको बताए । उनले आए आइज नभए जानलाई बाटो खुला छ, भने जस्तो व्यवहार गरेको बताए । उनले ओलीले बालुवाटार, बालकोटलगायतका ठाउँमा बोलाएकाले आफू नगएको उनकाे भनाइ थियाे ।